Universal Tv Live - Faysal Cali Waraabe: Dadka ka hadlaya heshiiska Berbera may ka...
Faysal Cali Waraabe: Dadka ka hadlaya heshiiska Berbera may ka hadlaan Heshiiska Turkiga ee MuqdishoFaysal Cali Waraabe Gudoomiyaha Xisbiga UCID ee Somaliland, ayaa ka hadlay heshiiska ay kala saxiixdeen Somaliland iyo Imaaraadka Carabta ee ku qotoma Saldhiga Berbera ay ka dhisanayaan Imaaraadka.
Waxa uu ku tilmaamay dadka diidan heshiiskaasi ee dhaliisha kala duwan jeedinaya inay yihiin kuwa diidan horumarka Somaliland.
Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay dadka dhaliilaya heshiiska Saldhiga Imaaraadka in loo baahan yahay inay ka hadlaan Saldhig uu sheegay Turkiga inay ka hirgelinayaan Magaalada Muqdisho.
“Heshiiska ay kala saxiixdeen Imaaraadka carabta iyo Xukuumadda Soomaliland waxa uu niyad jab weyn ku yahay kuwa kasoo horjeeda Hormarka Somaliland, waxaan la yaabay qof walba Saldhiga Berbera ayuu ka hadlayaa, miyaysan dadka arkaynin Saldhiga aadka u weyne ee Turky-ga ka dhisanayo Magaalada muqdisho”, ayuu yiri Feysal Cali Waraabe.
Somaliland iyo Dowladda Isutaga imaaraadka carabta ayaa xalay kala saxiixday heshiiska dowladda Imaaraadka ay kula wareegaysa Saldhiga Militari ee Magaalda Berbera ee Gobolka Saaxil.NextShabaab oo oday 82 jir ahaa ku toogta...PreviousMeydadka saddex ruux oo Somali ah oo ...Comments